Uchishandisa Vakwegura Masherufu Makambani uye Vakwegura Makambani ane Chikwereti Lines
Heino muenzaniso chaiwo wekuti Aged Corporation pamwe neCorporate Chikwereti Chekuvaka Chirongwa chinoshanda sei uye sei vaviri vedu vatengi vazhinji vakashandisa yavo vachangowana kambani kutenga zvivakwa. Iwe zvakare uchaona mifananidzo yeiyo chaiyo projekiti pazasi. (ONA: Iyi ndeyedzimba dzimba rubatsiro rwemari uye kwete kiredhiti kiredhiti mutsara.)
Ramba uchifunga izvi haisi iyo yega nzira yekuti kambani kiredhiti ingashandiswa. Uyu unongova muenzaniso mumwe wezhinji nzira dzinogona kuitika. Zvakare, ramba uchifunga kuti nhanho-nhanho-yekufambisa-uye manyorerwo ezvekupa kwako zvakanyorwa, uye ruzivo rwacho rwakafukidzwa mumakosi ekudzidzisa ayo anosanganisirwa nesherufu makambani ane real estate mari rubatsiro chirongwa.
Ongorora: Chenjera nemasangano muzuva rino uye zera anoti iwe unogona kuwana kambani inotova nemakiredhi echikwereti akasungirirwa pairi. Kana iwe uchida kuwana kambani yakwegura, tipe runhare. Mushure mekuiwana kubva kwatiri isu tinogona kukubatsira iwe kuvaka chikwereti pairi.
NDINODZIDZA KUTI: Tine zvirongwa zvitsva panzvimbo peiyi yatinogadzira maprofayili emakambani emakambani uye tinokubatsira iwe nekuvaka chikwereti chebhizinesi kuitira kuti iwe ugone kuvhura mitsara yechikwereti kune yako yekare kambani. Nzvimbo yekukweretesa yashanduka saka hatisi kupa chirongwa ikozvino sezvatsanangurwa pano. Ruzivo rwuri pazasi musanganiswa weumwe ruzivo uye ruzivo kubva kune vanotora chikamu muchirongwa.
Vaviri vevatengi vedu muTacoma, Washington, murume nemukadzi anonzi Dwayne & Janet Anderson, vaida kutenga ivhu, kuvaka dzimba mbiri, uye kutengesa dzimba kuita purofiti. Mushure mekuwana kambani kubva kwatiri vakapinda kumamwe makosi ekudzidzisa atinopa ekuti vangashandisa sei yavo yemakambani kiredhiti kiredhiti.
Ivo vakabva vapa chipo pazvikamu zviviri zve $ 125,000 chidimbu icho chaibhadharwa nekambani kiredhiti. Iyo kosi yekudzidzira inoenda pamwe nekambani yako nechirongwa chekubatsira chikwereti ichakudzidzisa kuti maDwayne naJanet vakakwanisa sei kutenga ivhu rakabhadharwa zvizere nehurongwa hwekambani yechikwereti haina kana dhiri muhomwe dzavo.
Chaicho Mufananidzo weKuvaka Roti reVatengi Vedu, Dwayne & Janet, Kuti Vakawana Vachishandisa Yedu Corporate Chikwereti Chirongwa.
Chikwereti chekuvaka chatakabatsira Dwayne & Janet kuwana kuisa mari muhomwe yavo pakutenga ivhu. Nekudaro, mari kubva kuchikwereti chatakavabatsira kuti vatore inotengwa kuti vatenge ivhu uye zvimwe zvinopihwa basa parinenge richikura.
Dwayne & Janet havafanirwe kubhadhara kusvikira imba yatengesa. Ivo havafanirwe kubhadhara mubereko pane iyo yose mogeji. Ivo vanongofanirwa kubhadhara iyo iyo iyo mukweretesi chaiye yaanopa mari. Nekuda kwemukurumbira wedu, simba rezvemari uye ruzivo, isu tine hurongwa nevakweretesi avo, kusiyana nemabhangi, vanozobhadhara chirongwa chese pasina mari kunze kwehomwe. (Sezvingatarisirwa, kuve nesherufu mubatanidzwa hachisi chinhu chega-chekumira chekutora chikwereti. Kukosha kwenzvimbo inobhadharwa nemari uye kugona kwemari kweprojekiti kunotamba zvakanyanya kukosha mabasa.)
Mune ino kesi, pakutenga ivhu, mukweretesi anokwana kubhadhara mutengesi wepasi pamwe nemari yekuwedzera kuti aende muhomwe dzaDwayne naJanet. Iwe unozodzidza hunyanzvi uhu mune yekudzidzira kosi, maitiro ekunyora kupihwa uye uko kunowana iwo madhiri. Zvekare, Dwayne & Janet havafanirwe kubhadhara kune chero rogeji kusvikira imba yatengesa.
Iyo Corporate Chikwereti Chirongwa uye chimiro chechipo chakakwanisa kubhadhara zvakakwana kutenga nzvimbo yacho pamwe ingangoita madhora zviuru makumi maviri nezvishanu pajenya yakakwanisa kupinda muhomwe dzaDwayne & Janet. Sezvo vakatenga zvivakwa zviviri kamwechete, vanonzi vakakwanisa kuisa muhomwe madhora zviuru makumi mashanu kumberi. Iwe uchadzidza kuti vakazviita sei mune inoenderana kosi.
Pakangowanikwa mvumo, inodzidziswa nekosi yedu, takawana Dwayne naJanet vavaki. Mukweretesi anotora dhiri rekutanga (muripo) kumuvaki. Zvakadaro, chirongwa ichi chinotsigirwa zvizere nekambani kiredhiti uye hapana mari yabuda muhomwe dzaDwayne naJanet. Dwayne naJanet vaisada kuziva kuvaka imba. Vakanga vasina ruzivo rwekuvaka. Ivo vaingoteedzera yedu yekudzidzira kosi uyezve ndokuhaya muvaki watakavawanira. Uye zvakare, vagadziri venguva yakazara nemakumi emakore ezviitiko zvakare vakakwanisa kubatsirwa nekushandisa chirongwa chedu.
Chaiyo Mid-Kuvaka Faze yeImba Yedu Corporate Kiredhiti Vakweretesi Vakapihwa Mari Kune Dwayne & Janet
Mushure mekumisikidzwa kweimba kwapera, mukweretesi anotora imwe mari kune anovaka kubva pamutsetse wavo wekuvaka wechikwereti.
Mushure mekumisikidzwa kwedenga uye kudhirowa kwapera, dhiri rekupedzisira rinobhadharwa neyemberi-yakatenderwa kiredhiti kiredhiti kiredhiti kuti apedze basa rekupedzisa uye kupenda.
Iye zvino chivakwa chapera. Mutengo wemusika wakauya mu $ 385,000.
Mari inofungidzirwa yeprojekti yaive seinotevera:
a. $ 125,000 yekutenga iyo ivhu - yakabhadharwa zvizere neanokweretesa uye mutengesi mari.
b. $ 25,000 yekuwedzera chikwereti kubhadharwa icho chakapinda muhomwe dzaDwayne naJanet kumberi pamberi pekutenga ivhu.
c. $ 99,000 mukuvaka inodhonza. Yakazara: $ 224,000 iyo yakabhadharwa zvizere nezvikwereti. Mutengo wemusika: $ 385,000Total inofungidzirwa purofiti usati wavhara mutengo: $ 161,000 (inova $ 385,000 - $ 224,000).
Sezvo Dwayne naJanet vari kuvaka dzimba mbiri, mari yakawandisa inofungidzirwa zvichibva pamutengo wemusika uyu i $ 322,000 ($ 161,000 X 2) .Mufananidzo uyu Muenzaniso Chaiye Mashandiro Avakaita Kambani Yedu Yechikwereti Yakashanda Kune Vaviri Vedu Vatengi Vakawanda.
Iyo purojekiti yose yakakwanisa kutengwa, kuvakwa uye kutengeswa pachishandiswa iyo kambani kiredhiti, zvinonzi, pasina kana kobiri kubva muhomwe dzaDwayne & Janet. Tambo yekuvaka chikwereti yakafukidza zvese zvinodhura.
Chinangwa che peji rino ndechekukupa chaiyo chaiyo-yehupenyu muenzaniso kubva kune vaviri vedu vatengi. Kirasi yekurarama kana DVD inouya neyako kudzidziswa inokuudza iwe nhanho-nhanho ruzivo rwekuita kukwidziridza purofiti yekambani yemasherufu nerubatsiro rwechikwereti rwunopihwa mupakeji yedu. Tsamba kubva kuna Anderson kuenda kuna CEO we Makambani AkabatanidzwaChristmas Mufananidzo kubva kuna Anderson Mhuri Rwendo kuenda kuDisneyland Iyo Yakaperekedzwa Pamusoro Petsamba
Kuraira Aged Corporation kana Shelf Corporation ine Kiredhiti rubatsiro rwekudzidzisa, inonziwo masherufu zvitunha nechikwereti chirongwa kana masherufu zvitunha nechikwereti pasuru kana masherufu zvitunha zvine kiredhiti mitsara (mitsara inoenderana nemukweretesi mvumo uye kwete yechinyakare mari yechikwereti mitsara) kana ruzivo pamusoro pemakambani akwegura ane paydex scores, ndapota fona 1-888-444-4412, kana pasirese ku + 1-661-253-3303 uye taura nemumwe wevanyanzvi vedu vanofara kukubatsira. Ndokumbira ufonere Muvhuro kusvika Chishanu pakati pemaawa e7: 00 AM uye 5: 00 PM Pacific Nguva.
MUFANANIDZO UYU NDEWE WE MUENZANISO ZVINANGWA ZVINOBVA KUNE MUTENGI WEPAMUSORO. ZVINHU ZVAKO ZVINOGONESA. MUMWE MUENZANISO PAMWE ZVINHU ZVESE ZVAKANZI ZVINOTENGESWA KUMUMWE INVESTORA PABHADZO PANYAYA DZINOTENGESWA PASI PASI PANE PAMWE PABHUKU RENYAYA YEMAHARA UYE PAKUSIYANA YAKASIYANA PASI YEMITENGO YAKARATIDZWA PAMUSORO. KUBVA KUNZWISISA KWEDU, BHAIBHERI RIKURU SEZVINOFANIDZWA ZVINOTARISIRWA KUVA KANA KUTI ZVAKAZIVISWA NEMUTSVIRI AKATENGA HUPENYU.
Masherufu Makambani, Vakwegura Masangano uye maAdvs Ari Kutengeswa